Guddi 748 / vc
Guddi 748 / vc sano 3 5 bilood ka hor #104
Waxaan eegay oo idil waxaan haysanaa inaan helo guddi bilaash ah ama bakhaar-fure ah oo aan ku ridi karo 748F oo aan ku duulo (waxaan ku qasbanahay in aan qodo xiriirka dambe ee lol).
midka aan u adeegsanayo guddiga 747 default taas oo wax walba, waxay u shaqeysaa ... laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan helo VC habboon. GANAAAN, caadi ahaan waxaan u duuli karaa guddi 2d, laakiin VC waa fiican hadda iyo markaa markaad heshay qorrax ama quruxda fiican ka hor
Guddi 748 / vc sano 3 5 bilood ka hor #112
Gh0st, fiiri maraqyada Ken Wigginton. Anigu waxaan lahaa arrin isku mid ah, oo doonaya in 2D / VC cockpit ka fiican, oo uu sameeyey dhowr farsamo oo wanaagsan, wax walba oo loogu talagalay Boeing iyo Airbus.
Guddi 748 / vc sano 3 5 bilood ka hor #116
Waxaan fiirin doonaa in ... mahad.